Sidee loo sameeyaa tijaabada tijaabada ah ee loo yaqaan 'Cypionate testosterone' oo laga soo qaado budada isteeroydhiska
/blog/Cootionate testosterone/Sidee loo sameeyaa tijaabada tijaabada ah ee loo yaqaan 'Cypionate testosterone' oo laga soo qaado budada isteeroydhiska
Posted on 09 / 22 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray Cootionate testosterone.
Aagga jir-dhiska, waxaa ku jira steroid iib - kulul -Testosterone Cypionate budada, Kaas oo gacan ka geysanaya dhisida murqaha iyo xoojinta lafaha, sidoo kale loo isticmaalo lafa-darrada iyo xoojinta galmadaDadku badanaa waxay ka soo iibsadaan alaabada Hormoonkaas Cypionate dukaamada internetka.Maalinta, jir-dhiseyaal badan ayaa u muuqda iibso steroids budo cayriin ah Qiimaha hooseeya oo aan ahayn qaababka wax soosaarka adag.Maanta waxaan halkan u joognaa inaan wadaagno hab wanaagsan oo lagu sameeyo budada tijaabada ah ee Cypionate.
Waxyaabaha la diyaarinayo
Tusaale ahaan waxaan qaadanaa tijaabo Cumpionion Cypionate 100 mg / mL.
ML kasta oo ka mid ah xalka 100 mg / mL wuxuu ka kooban yahay:
Testosterone Cypionate budada ……………………………………………………………………. 100 mg
Benzyl benzoate ………………………………………………………………………………………… 0.1 mL
Saliida cudbida ah ………………………………………………………………………………… 736 mg
Khamriga Benzyl (sida ilaaliyaha) ………………………………………………………… 9.45 mg
Sifaynta (cabbir kasta)
Gawaarida Dhabarka ah ee Sterile (Cabbir kasta)
Qiyaasaha digitalka ah ee lagu cabbiro 0.01g
Marka hore – Ku miisaama Cypionate-ka tijaabada dhalada sida kor ku xusan, ku dar Benzyl Alcohol iyo Benzyl Benzoate.
Ta labaad –Shaqeeyayaashu waxay bilaabi doonaan isla markaaba inay kala diraan budada laakiin si loo dedejiyo hawsha waxaa suurtagal ah in la isticmaalo biyo-maydhasho.
Fare jajabka ku dhaji dhowr mitir oo biyo ah digsi ama wax la mid ah: waxaa muhiim ah inaadan isticmaalin biyaha kulul aad u kulul sababtoo ah tani waxay dhalinaysaa waxyaabo kale si loo qoondoobo-150f waa heerkul fiican oo la isticmaalo, biyo kale oo la karkariyey . Saliiddu waa in ay ahaato heerkul ah isla marka xalka lagu daro markaa haddii aad diirinayso xalka biyaha qubeyska waa inaad sidoo kale la mid tahay saliidda.
Hagaha Fulinta ee Nandrolone Ester (DECA Durabolin)
Ujeedada mawduucaani waa mid si buuxda u dhammaystirta budada ah ee dareeraha. Waa inaysan jirin "Gorma Hormoon" ama waxkasta oo muuqda oo ku jira xalka iyo mar markaan la gaadho tallaabada xigta.
Ka dib – Ku dar saliidda Cottonseed diirran ee xalka
kiiskan 736ml waa in lagu daraa. Si tartiib ah u walaaq, waa inaysan jirin hoosto geedka hoostiisa-mar markaan tani dhacdo isla markiiba ka saar biyaha qubeyska oo u dhaqaaq geedi socodka shaandhaynta.
Kor: Dufanka steroid ayaa si buuxda u kala diraya dareerayaasha, saliidda haweenta lagu daro, badeecaduna waxay diyaar u tahay in la sifeeyo.
Marka xigta – U soo saar xalka saliingaha aad ku shaandheyn doonto
Tani waxay noqon kartaa sirinjiye ballaaran oo weyn ama tan waxaa lagu celin karaa dhowr jeer iyadoo la isticmaalayo siriinje yar. Ka saar shaandhada siringe ee 0.22um oo ka sameysan xargaha iyo xaaqida cirbadda cagaaran dhinaca dhinaca yar ka dibna ka dalbo syringe.
Ka tirtir dusha sare ee nalalka sterile oo leh suufka khamriga ahna gali cirbadda cagaaran, ku rid cirbadda ku xiran sifeynta sirinjiraha ilaa galka sida hoos lagu muujiyey:
Notes: Cirbada labaad waxay cadaadisaa cadaadiska maaddaama xalka uu galo shubka. Cabbirta cadaadiska ku sii daa sirinjeerka si aad uhesho shaandhada. Tani waa qeybta ugu muhiimsan ee geeddi-socodka oo dhan sida ay tahay waxa nasiib u ah alaabtaada. Dhammaantood waxay dhameeyeen steroids ka shay kasta oo steroid ah waa inay maraan geedi socodkan.
Marmarka qaarkood waxay ogaan kartaa in shaandhada la xiro ama in geedi socodku si tartiib ah u dhaco - waxaa la aqbali karaa in lagu bedelo shaandhada cusub haddii ay taasi dhacdo si loo badbaadiyo waqti. Waqtiga ay qaadato si loo xareeyo steroids waxay ku xiran tahay xajmigah budada steroid ayaa la fayl-gareeyey iyo inta la filayo, iyo waliba mg / ml ee sheyga.
Ugu dambeyntii--Marka la soo saaro badeecada waxaa lagu sifeeyaa weelka nadiifka ah ee geedi socodku dhamaystiran yahay. Markaa waxaad bilaabi kartaa inaad isticmaasho.
Ma fududahay? Isticmaal fudud oo qiimo badan leh.